Kuziva Zvino Izvo Zvaanoziva Izvozvi, #MyHodgesStory »Hodges U
Kuziva Zvino Izvo Zvaanoziva Izvozvi
Kuziva Zvino Izvo Zvaanoziva Izvozvi - #MyHodgesStory Martha "Dotty" Faul
Nguva refu Martha “Dotty” Faul asati anyoresa kuHodges University, akapedza makore angangoita makumi maviri achivaka basa rekuchengetedza mutemo kuDeSoto County Sheriff's Office uye neCharlotte County Sheriff's Office.
Kubva pakushanda patrol semutevedzeri washeriff kusvika pakubata kuferefetwa kwematsotsi semutikitivha, Faul aona nekupupurira izvo zvingafungidzirwa nevakawanda. Akagara kudivi remutemo unonyanya kubatwa nezvakashata uye nehuchokwadi hwevanhu, Faul akarega basa muna Nyamavhuvhu 2009 ndokuvhura rake bhizinesi, Mutongi Investigations Services, Inc.., muna 2010 senzira yekumupa rubatsiro kune avo vanoshaya.
Paaive mumatanho ekutanga ekuvhura bhizinesi rake, akaona kukosha kungave nedhigirii mukuvaka kambani yake. Ndichiri kushanda kuCharlotte County Sheriff's Office, vamiriri kubva kuHodges University (yainzi panguva iyoyo International College) vakashanya kuzokurukura nezvezvipo.
"Ndinozvidemba kuti handina kuvaendesa panguva yavo," akaseka. "Asi pakasvika nguva yekudzokera kuchikoro, ndakarangarira Hodges, saka ndakanyoresa muchikoro chebhizinesi muna 2009."
Mushure mekupedza mwedzi mitanhatu muchirongwa chebhizinesi uye achishanda mukutengesa kumahombekombe egungwa eFlorida, Faul akaziva matarenda ake aive akakodzera zvirango zvekutongwa kwemhosva, kwete bhizinesi, saka akachinja madhigirii, achitora ese makirasi ake online.
Semudzidzi wepamhepo, anobvuma, “Ini ndinonyatsonzwa kuti ndakatariswa zvakanyanya nekuti mabhodhi ehurukuro akandipa mukana wekutaura, uye varairidzi vaiwanika nyore. Ndakanga ndisingafaniri kunetseka kuti nguva yaizopera pakupera kwekirasi uye kumhanyira kumberi kuti ndibvunze purofesa mubvunzo. ”
Kuunza makore ake ezviitiko mukuchengetedzwa kwemutemo kuchirongwa chake chedhigirii, Faul akaziva kuti rakawanda sei rebasa rake rehunyanzvi raive rakanangiswa panzvimbo imwe chete, uye kuti makosi acho akapa sei ruzivo rwakakosha munhandare yakakura iri kutonga mhosva.
“Iwo makosi akandidzidzisa nezve manejimendi, kugadzirisa uye kutonga kwevechidiki. Ndakadzidza zvakawanda nezvenhoroondo yekutongwa kwemhosva uye kuti tsika dzakasiyana dzinosvika sei kumatare edzimhosva, ”akadaro.
Kumuwana Bachelor's Degree muCriminal Justice muna 2012, akaisa pfungwa dzake pakuvaka bhizinesi rake. Iye nechikwata chake chevaongorori makumi maviri vanoshanda nenyika yeFlorida kubatsira varombo muhurongwa hwekutongwa kwematsotsi vasingakwanise kuzvidzivirira zviri pamutemo. Kushanda pamwe nemagweta, Faul nechikwata chake vanoshandisa hunyanzvi hwavo kubatsira kuunganidza chokwadi, humbowo neruzivo kuvaka nyaya inoshanda.
Nepo zviitiko zvacho zvichibva pakubiridzira kusvika pakuuraya kusvika kune vanhu vakashaika, Faul anoshandisa hunyanzvi hwake mukubata kunyepa nekubiridzira kubatsira mukuferefeta; zvisinei, nekuda kwehunhu hwebhizimusi rake uye hukama hwayo nehurongwa hwezvemutemo, akadzokerazve kuna Hodges kuti aenderere mberi nedzidzo yake, chete panguva ino muzvidzidzo zvemutemo.
"Ndakataura naDr. [Char] Wendel, uye akandiudza kuti zvidzidzo zvemutemo zvakasiyana zvakanyanya nekutongwa kwemhosva, asi ini ndaona kuti ndinozvida, uye vaviri vacho vanoenda-pamwe," akadaro. .
Kunyoresa mu Mudzidzisi weSainzi mune Zvemutemo Zvidzidzo degree degree mu2016, Faul anobvuma kudzidza uye kupihwa kwakamugonesa kuti ape bhizinesi rake munzira nyowani. Kudzidza nezve torts, kutevedza uye mafupi maficha, Faul ari kushandisa iyo ruzivo kubatsira kuchinja nzira iyo iye nechikwata chake vanogona kubatsira zvirinani magweta avo.
“Kuziva mashandiro anoita mutemo kunokubatsira zvakanyanya kana uri kunze kwemugwagwa. Kana ndichiziva zvichaitika mudare uye nei vachida zvimwe zvinhu, zvichaita kuti nyaya yangu ive nani, ”akatsanangura. "Zvino, kune rimwe divi, ndinoziva zvavaifanira kunge vakaita, saka ndinogona kuzviisa kumagweta angu kuti avabatsire."
Kwangosara mavhiki mashoma asati apedza kudzidza muna Zvita 2017 aine degree raTenzi wake, Faul anotarisira kutora ruzivo rwake uye ruzivo rwehunyanzvi uye kuwedzera matarenda ake munzvimbo yekudzidzisa.
“Ndakapfuura nemuzvinhu zvakasiyana siyana, uye ndinoda kudzosera zvimwe zvacho, uye kudzidzisa inzira huru yekuzviita. Kugona kugovera zvimwe zvezviitiko zvangu uye nekugovana rumwe ruzivo rwandakadzidza uye mashandisirwe aro - zvinondigutsa kwazvo. ”
Tags: Justice Justice, Hodges Yunivhesiti, HodgesU, Legal Studies, Martha Faul, Master of Legal Zvidzidzo, Gara Pedyo Enda Kure